ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နှင့် “ဝက်သားဟင်း” …. – Shwe Thoon 8 Online Media
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နှင့် “ဝက်သားဟင်း” ….
ထမင်းချက်ဆောင်အတွင်းသို့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ရဲဘော် ဒီနေ့ဘာဟင်းချက်သလဲ ဗိုလ်ချုပ် ဒီကနေ့ ဝက်သားဟင်းချက်ပါတယ် ကောင်းတယ် ကောင်းတယ် ဒါနဲ့နေပါဦးရဲဘော် ရဲဘော်ချက်နေတဲ့ဝက်သားက ဒယ်အိုးကြီးထဲက ဝက်သားနဲ့ ဒန်အိုးထဲကဝက်သား မတူဘူးလား
အတူတူပါပဲ ဗိုလ်ချုပ် ဒါဆို ဒန်အိုးနဲ့ချက်တာနဲ့ ဒယ်အိုးကြီးနဲ့ချက်တာ ဘာကွာနေလို့လဲ ဒီလိုပါဗိုလ်ချုပ် ဒယ်အိုးကြီးထဲက ဝက်သားတွေက ဗိုလ်မှူးကြီးစားဖို့ ကောင်းကောင်းစပါယ်ရှယ် သီးသန့်ချက်တာပါ ဒါဆို ရဲဘော်ကပဲ ဒန်အိုးထဲကဝက်သားကို ဒယ်အိုးကြီးထဲပေါင်းထည့်လိုက်ပါ ဟုတ်ကဲ့ ဗိုလ်ချုပ် ချက်ချင်းပေါင်းလိုက်ရ၏။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက စားဖိုဆောင်အတွင်းမှ ထွက် သွားပြီ။ ရဲဘော်များက ဗိုလ်ချုပ်ကိုအလေးပြုလိုက်ကြသည်။ ထိုနေ့တန်းစီချိန်တွင် ဗိုလ်ချုပ်က ရဲဘော်တို့ ဒီကနေ့ တပ်မတော်ထဲရောက်လာတဲ့ ရဲဘော်တိုင်းဟာ ဗမာပြည်ကိုချစ်တဲ့စိတ် မိမိအမျိုးကို ချစ်တဲ့စိတ် သူ့ကျွန်မခံလိုတဲ့စိတ်တွေကြောင့် ဗမာ့တပ်မတော်ထဲ ဝင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။
ဗိုလ်မှူးကြီးများ ဗိုလ်မှူးများဟာလည်း အဲဒီမျိုးချစ်စိတ် နဲ့ဝင်ခဲ့ကြသလို ရဲဘော်တွေဟာလည်း ဒီမျိုးချစ်စိတ် နဲ့ဝင်ခဲ့ကြတာပဲ။ ဒါကြောင့် ဦးတည်ချက်တူညီတဲ့ တပ်မတော်သားအချင်းချင်းဟာ ခွဲခြားမှုမရှိစေဘဲ စားရေးသောက်ရေးမှာလည်း
တစ်ပြေးညီစားသောက်ကြဖို့လိုတယ်။ အဲဒီ တစ်ပြေးညီစားသောက်ခြင်းဟာ အချင်းချင်းစိတ်ဝမ်းကွဲမှုကို မဖြစ်စေဘဲ လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ဆီအရောက်လှမ်းဖို့ အရေးပါတဲ့ညီညွတ်မှုကို ဖြစ်စေတယ်ဆိုတာ ရဲဘော်တို့ သတိချပ်ထားကြပါ ။ ။ ဦးမြသွေး ရဲဘော်စိတ် မော်နီတာဂျာနယ်
လေးစားစွာဖြင့် ခရစ်ဒက်……. သော်တာရောင်(မန်း ) ငှက်ကလေး
ထမင်းချက်ဆောင်အတွင်းသို့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ရဲဘော် ဒီနေ့ဘာဟင်းချက်သလဲ ဗိုလ်ချုပ် ဒီကနေ့ ဝက်သားဟင်းချက်ပါတယ် ကောင်းတယ် ကောင်းတယ် ဒါနဲ့နေပါဦးရဲဘော် ရဲဘော်ချက်နေတဲ့ဝက်သားက ဒယ်အိုးကြီးထဲက
ဝက်သားနဲ့ ဒန်အိုးထဲကဝက်သား မတူဘူးလား အတူတူပါပဲ ဗိုလ်ချုပ် ဒါဆို ဒန်အိုးနဲ့ချက်တာနဲ့ ဒယ်အိုးကြီးနဲ့ချက်တာ ဘာကွာနေလို့လဲ ဒီလိုပါဗိုလ်ချုပ် ဒယ်အိုးကြီးထဲက ဝက်သားတွေက ဗိုလ်မှူးကြီးစားဖို့ ကောင်းကောင်းစပါယ်ရှယ် သီးသန့်ချက်တာပါ ဒါဆို ရဲဘော်ကပဲ ဒန်အိုးထဲကဝက်သားကို ဒယ်အိုးကြီးထဲပေါင်းထည့်လိုက်ပါ ဟုတ်ကဲ့ ဗိုလ်ချုပ် ချက်ချင်းပေါင်းလိုက်ရ၏။
← ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေး ကို သြဂုတ်လ (၁၀) ရက်နေ့ တွင် ရုရှား နိုင်ငံ မှတ်ပုံ တင်မည် …….
မပြောပလောက်တဲ့ သေးသေးမွှားမွှားကိစ္စလေးတွေကအစ ပရိသတ်တွေနဲ့ စီနီယာအနုပညာရှင်တွေအပေါ် အလေးထားတဲ့ ပိုင်တံခွန်.. →